Ny Pentekotista teo aloha pastora Michael Karlendal hiala ny Fiangonana Katolika | Apg29
Tsy miova fo izy noho ny faharesen-dahatra ara-baiboly, fa noho ny antony ara-tantara. Efa izany no tokony ho fampitandremana mitodika jiro mena.
Tsy tokony hino ny Fivavahana Katolika satria tsy hamonjeko anareo. Tsy mamonjy Protestanta, fa ny finoana ny Tompo Jesoa Kristy mamonjy.
Mandao ny Fiangonana Katolika
Ny Pentekotista teo aloha pastora Michael Karlendal, izay niova fo ho amin'ny Fiangonana Katolika in 2016, nandao ny fiangonana ankehitriny. Ao amin'ny lava lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy , dia manazava ny antony - ny amin'io bilaogy io ihany izay efa teo aloha, ary niaro ny finoana katôlika aelin'ny.
Ao amin'ny lahatsoratra lava, dia manoratra, ankoatra ny zavatra hafa, ny antony lasa Katolika. Nieritreritra izy fa ny Fiangonana dia tantara Free-ary, noho izany, fanadihadiana ny "ara-tantara fakany" ao amin'ny Fiangonana Katolika. Ary indro misy zavatra tsy izy izany. Hoy izy nanoratra tao amin'ny bilaoginy:
"Tsy ara-baiboly antony izay nahatonga fa lasa Katolika, na dia afaka mamaky ny Baiboly amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny Fivavahana Katolika, nefa ny antony ara-tantara fotsiny."
Tsy miova fo izy noho ny faharesen-dahatra ara-baiboly, fa ny ara-tantara ny antony . Efa izany no tokony ho fampitandremana mitodika jiro mena.
Inona no finoana ho amin'ny famonjena?
Rehefa avy nianatra indray ny tantara, dia niova ny heviny, ary nanatsoaka hevitra fa ny Fiangonana Katolika tsy miombon-kevitra.
"Ary ankehitriny nandao ny katolika sy ny modelim Eritrereto indray toy ny Protestanta."
Ho ahy izany dia toa hafahafa ihany ny mieritreritra Protestanta indray rehefa mieritreritra fa ny Katolika nandritra ny taona maro. (Raha toa ka tsy mahatakatra ny teny modelim Hazavaina eto ary eto .)
Tsy momba ny mifidy Katolika na Protestanta. Izany rehetra momba anao, i Jesosy na tsia.
Nahoana no dia niova ny fiangonana
Nanoratra mailaka, ary nanontany tena raha toa izany maninona ny hamoaka lahatsoratra momba azy tao amin'ny Apg29. Namaly izy hoe fa dia tsara ary rehefa avy mamaky ny lahatsoratra volavolan, dia tonga niaraka tamin'ny fanazavana ny antony hafa niova ny fiangonana.
"Ho ahy, izany rehetra izany dia foana ny resaka manaraka an'i Jesosy sy miezaka manao ny sitrapony. Rehefa tonga ny Katolika, dia satria tamin'izany dia tonga any amin'ny finoana fa ny Fiangonana Katôlika dia marina ny fiangonana izay niorina Jesosy fotsiny ny vatany fotsiny, ary avy eo dia mety ho somary antonony fa amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesosy, te ho anisan'ny zavatra efa nanorina Jesosy.
Ankehitriny dia tsapako fa diso nandeha teo aloha. I Jesosy no nanorina ny fiangonana, ary ny fiangonana dia vaky fotsiny tsikelikely fandaminana sy ny fotopampianarana. Nefa tsy misy ny sampan 'ny fiangonana nizara izao dia afaka milaza fa tany am-boalohany na SAMPA faka. Taorian'ny Jesosy dia afaka tsy midika fa tsy maintsy manaraka ny antokom-pivavahana iray manokana. "
Inona no Azoko tsara dia Michael Karlendal tena nianatra, tsara-mamaky sy ara-tsaina, fa ny zava-dehibe dia ny mino an 'i Jesoa sy hovonjena. Raha toa ianao manana ny finoana ara-baiboly tsotra ny Tompo Jesoa, tsy mitady ny "fiangonana manan-tantara" mba hahazoana tsara, satria avy eo no mety.
ho niova fo
Fihetsiko izany ho toy ny Kristianina mba hampiova finoana ny Eglizy Katolika. Aza manao tsara ny Kristianina (ny olona izay voavonjy) niova fo (mibebaka) ny fiangonana? Ianao mibebaka an'i Jesosy , ary tsy ho any am-piangonana.
Ao amin'ny valin-tamiko i Michael Karlendal amiko eo jerena ny teny hoe "niova fo".
"Raha ny amin'ilay teny" niova fo "I Miombon-kevitra aminao fa dia ampiasaina in-kafa izany. Raha ny marina, izany dia midika hoe ny anjara, ary manao izany afa-tsy amin'i Jesosy. Fa tsy maintsy mariho fa ny teny dia ampiasaina ankehitriny amin'ny hafahafa fomba toe-javatra sasany, ary raha manana hevitra hafa noho ny heviny ara-Baiboly. "
Tena tsara fa Michael Karlendal hahatakatra fa nefa tsy ho hitany ny valiny dia efa miandry ny Eglizy Katolika. Aoka ny olon-kafa hahatakatra izany koa izay nanaraka azy amin'ny fikarohana. Ny valiny dia ho hitanao ao amin'ny Tompo ihany 'i Jesoa Kristy.
Ary rehefa mandray ny olona velona 'i Jesoa Kristy ho Tompo ny ainy izy ireo nahita ny tsara sy nahazo valiny!
Aoka ianao ho fanampiana
Ity lahatsoratra ity dia tsy natao mba hanantonana avy Mikael Karlendal toa (izy no olo-malaza), fa mety hanampy ho an'ny olona izay miady mafy amin'ny olana toy izany ka tsy ho diso.
Aoka ho faly ny Michael Karlendal. Izany dia mahery fo sy marina nataony mba sahy miaiky fa diso.